Muxuu ku dambeyn doonaa mustaqbalka xaaska Mugabe? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaMuxuu ku dambeyn doonaa mustaqbalka xaaska Mugabe?
Harare (JigjigaOnline) -Toddobaadkan waxay dalka Zimbabwe u ahayd xilli lama ilaawaan ah, maadaama ay ku guda jireen tacsida iyo aaska qof laga jecel yahay dalkaas, aadna loo dahliili jiray siyaasadihiisa, Madaxweyne Robert Mugabe oo kamid ahaa dadkii asaasay dalkaas.
Dhimashada Mugabe ayaa sidoo kale shacabka dalkaas ay ku kala qeybsameen, oo qaar badan ayaa u muuqday inay qabaan in dalka la dagay halka kuwa kalena uu u ahaa halyeey Afrikaanimada ay ku weyned.
Inbadan oo kamid ahayd noolashiisa iyo xukunkiisa waxaa qeyb ka ahayd xaaskiisa Grace Mugabe oo haatan murugada la qeybsaneysa dad badan. Grace ayay dad qaar u arkayeen qof nasiib badan, taa oo waxbadan ka turjumtay wajiga siyaasadeed ee dalka Zimbabwe.
Garce waxay mar ahayd xoghayha khaaska ah ee Madaxweyne Robert Mugabe,markii dambe ee uu guursaday ayayse qof caan ah noqotay. Grace waxay si sahlan ugu soo biirtay siyaasadda dalkaas, oo waxaa ay hogaanka u qabatay ururka haweenka ee xisbiga ka taliya dalkaas ee Zanu PF.
Faragelintii ay ku sameesay xisbiga iyo siyaasadda dalkaas iyo damaceeda ku aadanaa inay wax ka noqotay Zimbabwe ayaa la rumeesan yahay in milateriga dalkaas ay ku dhalisay in ay soo farageliyaan xaaladda siyaasadeed ee Zimbabwe, taas oo keentay afgembigii xilka looga tuuray Mugabe iyo in uu soo afjarmo qorshihii iyo hamigii siyaasadeed ee ay lahayd Grace.
Ma waxaa jiray naceyb ay qaar kamid ah bulshada dalkaas u qabeen Grace? Shaki kuma jiro arrintaas, balse taa waxaa ay keentay in markii uu dhamaaday xukunka seygeyga ay dalka isaga carartay, lagana saaray xisbiga talada haya.
Balse hadda waa ay soo laabatay, oo umana aysan soo laabanin oo kaliya aaska ninkeeda.
“Waxay u heysatay in ay sii joogi doonta Zimbabwe, dacwad ayaa lagu soo oogi doonaa, balse waa ay sii joogi doontaa Zimbabwe,” sidaas waxaa yiri Patrick Zhuwao, oo ay qaraabo yihiin Muagbe, xulafa na ay yihiin Grace Mugabe.
Grace ayaanan ilaa iyo iminka wax war ka soo yeerin toddobaadkan, oo waxaa ay bartanka kaga jirtay aaska Mugabe oo ka dhacayay Magaalada Harare, kaas oo uu ka dhashay muran ku aadan halka lagu aasayo.
Waxay aad ula murugootay geerida seygeyda oo waxaa ay hoos taagneyd diyaaradii Mugabe ka soo qaaday dalka Singapore ee timid caasimadda Harare. Waxay ka soo horjeedsatay qorshaha dowladda, waxaana ay sameysatay qorshe ka duwan kan dowladda oo ahaa in Mugabe lagu aaso xabaalaha halyeeyada dalkaas, halka iyada iyo qoyskana ay doonayeen in lagu aasyo deegaanka uu ka soo jeedo.
Hasayeeshee su’aasha taagan waxay tahay, Grace Mugabe ma waxay dooneysay inay kusoo rogaal celiso saaxada siyaasadda? Yaase ku guuleysan doonaa dagaalka siyaasadeed? Madaxweyne Emmerson Mnangagwa se ma dhabarka ayuu aadiyay Grace mise isu soo bixii dadka yar ee aaska Mugabe wuxuu ahaa mid la qorsheeyay?
Maxay tahay sababta aysan dadka uga helin khudbadii Madaxweyne Mnagagwe ee ku aadaneyd Mugabe? Yaase hadda hormuud u ah siyaasadda qoyska Mugabe? Maxayse tahay sababta Grace Mugabe ay u dalbatay in madxaf loo dhiso Mugabe? Ma ku badbaadi doontaa halkaa? Mise waxay la heshiin doontaa Madaxweyne Mnagagwa?
Mugabe ayaa aaminsanaa in uu awooda sii joogi doonaa ilaa iyo inta ay nafta ku jirto, hasayeeshee xaqiiqda waxa ay tahay in Grace Mugabe ay la heshiiso dowladda, waa hadii ay dooneyso in dalkaas ay kula noolaato qoyskeeda oo hantidoodu ay doonayaan inay ku heystaan Zimbabwe.
“Wuxuu soo maray xaalad aad u daran, wuxuuna ahaa nin aad u murugeysan,”, sidaas waxaa yiri Walter Chidkhakwa, oo ay qaraabo yihiin Mugabe oo ka shekeynayay xaaladiisa bishii u dambeesay.
Siyaasadda waxaa la yirahdaa saaxiib joogta maleh ee waxay leedahay dan joogta ah, lamana garan karo in heshiis uu dhexmaro labada dhinac. Mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Zimbabwe ayaa u muuqda mid aan wanaagsaneyn, oo dowladda ayaa isku dayeysa inay qaado tallaabooyin lagu hagaajinayo dhaqaale burburka dalkaas, walow dowladda aysan heysanin tagaeerada shacabka, iyo waxyaabihii looga bahnaa, si looga meel gaaro qorsheyaashaasi.
Natiijooyinka ka dhashay arrimahaas ayaa uga sii dartay dhaqaalaha Zimbabwe, waxaana sidoo kale aanan wali soo kabsnain dimuqraadiyadda dalkaas.
Mucaaradka Zimbabwe ayaa aaminsan in lagu shubtay doorashadii sanadkii hore ka dhacay Zimbabwe, lagana yaabo in markale ay dhigaan dibadbax looga soo horjeedo arrintaas, si lamid ah wixii ka dhacay Kenya, si ay u dandaansadaan laamaha ammaanka, qalalaasana uga abuuraan Zimbabwe, dowladduna ay ugu qasbaan awood qeybsi.
Arrimahan badan oo is-biirsaday ayaa la aaminsan yahay in Grace Mugabe ay ku sii heyn doonaan qasriga saqafka buluuga leh ee uga dhisan Magaalada Harare, ayna ka dhowr sugeyso in la dhameystiro madxafka, diyaar garowna ay ugu jirto in aas gaar ah loo sameeyo Mugabe.
Grace ayaa laga yaabaa inay istuseysa inay heysato fursad kale oo ah sidii ay uga aargoosan lahayd raggii qiyaanay seygeyda, Robert Mugabe ee ka tuuray awooda dalkaasi.